Wasaaradda Waxbarashada dowladda Puntland, ayaa ku amartay mac-hadka Islaamiga ah ee Khadiija in aysan dib dambe u isticmaalin buug ku qoran Af-Soomaali | Dayniile.com
Home Warkii Wasaaradda Waxbarashada dowladda Puntland, ayaa ku amartay mac-hadka Islaamiga ah ee Khadiija...
Wasaaradda Waxbarashada dowladda Puntland, ayaa ku amartay mac-hadka Islaamiga ah ee Khadiija in aysan dib dambe u isticmaalin buug ku qoran Af-Soomaali
Wasaaradda Waxbarashada dowladda Puntland, ayaa ku amartay mac-hadka Islaamiga ah ee Khadiija in aysan dib dambe u isticmaalin buug ku qoran Af-Soomaali oo dagaal ooge ku tilmaamay madaxweyne, Cabdullaahi Yuusuf Axmed.
Mas’uuliyiinta mac-hadka Khadiija oo ku yaalla magaalada Garoowe ayaa looga yeeray xarunta wasaaradda, waxaana su’aalo laga weydiiyay buuggaas oo muran ka dhaliyay baraha bulshada, kadiba waxa lagu amray in ay joojiyaan.
Wasaaradda ayaa sida la xaqiijiyay la wareegtay buuggaas, oo mac-hadka Khadiijo u isticmaali jiray mid laga tixraaco taariikhda dad ay ku jiraan Col. Cabdullaahi Yuusuf Axmed iyo Gen. Maxamed Faarax Caydiid.
Dhinaca kale, wasaaradda Caddaaladda Puntland ayaa maanta shaacisay in dhammaan la diiwaan-gelin doono dugsiyada Qur’aanka iyo macaa’hidda diiniga ah ee ku yaalla Puntland.
Previous articleSoddon sana ka hor 26-kii September, 1983, dunida waxay ka badaadday dagaal la isu adeegsan rabay hubka Niyuukilarka.
Next articleBooliska Somalia oo ka hadlay Shaqaaqo ka dhacday degmada Wadajir
Maxamed Cusmaan Jawaari “ Caqabado iyo culeys oo naga horyimid arrimaha...
axmed shiikh - November 25, 2021 0
Guddoomiyihii hore ee baarlamanka Soomaaliya Maxamed Cusmaan Jawaari ayaa markii u horeysay ka hadlay isbaaro siyaasadeed oo loo dhigay, si looga wareejiyo kursigiisa xildhibaanimo. Jawaari...
Abiy oo ku Baaqay ‘Naf-huris’ lagu Badbaadinayo Ethiopia
9 lukaku- Chelsea galabta 3 dhibcood ayaan luminay waxaana naga badiyay...
Ra iisal wasare Rooble oo la kulmay Laamaha Amniga u qaabilsan...
Guushu waxaa ay u baahantahay oo Kaliya Xaq oo lagu taaganaada...
Kenya “ Waan canshuureynaa dadka isticmaala baraha bulshada ee ku faana...
Taalibaan oo meydadka dad ay dileen ku soo bandhigay meel fagaare...
axmed shiikh - September 26, 2021 0